အိုဆာကာမှ Kobe မြို့ကနေသွားဖို့ကဘယ်လို - Kobe မြို့ကနေအိုဆာကာသလော - Samurai and Ninja in Japan
အိုဆာကာမှ Kobe မြို့ကနေသွားဖို့ကဘယ်လို – Kobe မြို့ကနေအိုဆာကာသလော
အိုဆာကာမှ Kobe မြို့ မှစ. သွားကြဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားနှင့်အခြား transportatin အခြားနည်းလမ်း
အိုဆာကာမှ Kobe မြို့ကနေသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား (Kobe မြို့ – အိုဆာကာ) ၏ကုန်ကျစရိတ်တလမ်းများအတွက်¥ 1500 ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်¥ 3000 အတွက်အသွားအပြန်အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါ Kobe မြို့ – အိုဆာကာ ကျည်ဆန်ရထားစီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 6:09 pm တွင် Kobe မြို့ကနေထွက်ခွာ။ နောက်ဆုံးကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 23:25 pm တွင် Kobe မြို့ကနေထွက်ခွာ။ တစ်ဦးကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားဝန်ဆောင်မှုတိုင်း 10 မိနစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူထားနိုင်ပေမယ်ကဘူတာရုံမှာလက်မှတ်မဝယ်ဖို့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ပထမဦးစွာ3လှည်းသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျလိုခငျြထိုင်နိုင်, Non-ယူထားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အခြားလှည်း reserved နေကြတယ်, သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ သငျသညျ .JR-PASS, သငျသညျအခမဲ့များအတွက်ကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းရထားကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြု (သူတို့ထဲကအားလုံးမဟုတ်) ကကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး JR-PASS, ရှိပါက, သင်သာ HIKARI-ကျည်ဆန်ရထားကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦး JR-PASS, ရှိပါကသင်သည်အပေါငျးတို့သကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းရထားကိုအသုံးမနိုင်။ ဂျပန်တွင်ရောက်ရှိလာရှေ့တော်၌ထို JR PASS, ဝယ်ယူရန်ပေးပါ။ သငျသညျဂျပန်ရောက်ရှိပြီးနောက်ကိုသင် JR-PASS, ဝယ်ယူရန်လို့မရပါဘူး။
ခရီးသွားလာစျေးအချိုဆုံးလမ်းဘတ်စ်ကားယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုသန်းခေါင်တိုင်အောင်ရှိပါသည်။ ကကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားထက်3ကြိမ်နှေးကွေးသောကွောငျ့လူအမြားစုကဘတ်စ်ကားကိုရွေးချယ်ကြပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားများ၏အချိန်ဇယားကိုစစျဆေးဖို့နှိပျပါ ကဒီမှာ
Categoriesဘလော့ Myanmar TagsBuulet ရထား, Kobe မြို့ မှစ. အိုဆာကာမှသွားဖို့ဘယ်လို Kobe, ကအိုဆာကာမှ Kobe မြို့ မှစ. ရဖို့ဘယ်လိုကုန်ကျစရိတ်, ကျည်ဆန်ရထားမဘယ်လောက်, ဂျပန်မှ Kobe မြို့ကနေခရီးသွားလာမှု, ဂျပန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဂျပန်အတွက်ခရီးသွား, ဘတ်စ်ကား, ရထား, လေယာဉ်ပျံ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အစာရှောင်ခြင်းရထား, အစာရှောင်ရထား, အိုဆာကာ